प्राग गर्न कुराहरू? को हिउँदमा पर्यटकहरु के हेर्न?
प्राग - निरन्तर दुखेको खुट्टा छ एक अद्वितीय शहर, सजिलो अतिरिक्त वजन बढाउनका र unscheduled खरिद गरिन्छ। एकै समयमा, एक पटक म उसलाई राम्रो सडकमा पागल प्रेम पर्नु भ्रमण गर्नुभएको थियो। म क्रूर भोक, सहज जूता र capacious पर्याप्त सुटकेश यो शहर फेरि र फेरि फिर्ता। त्यसैले, प्राग पहिलो यो भूमि मा खुट्टा सेट गर्नेहरूलाई मा के गर्न? आउन जो पर्यटकहरु के हेर्न को हिउँदमा छुट्टी?
मा मध्य युरोप को सबै भन्दा ठूलो शहर, जो बोहेमिया को एक शताब्दीपछि पुरानो राजधानी हो। पर्यटक आँखा अघि VLTAVA को पानी मा 10 भन्दा बढी शताब्दीयौंदेखि प्रभावित, cathedrals, पुल, चर्च domes र सोने को पानी चढा टावर देखिन्छन्।
सुन्दर शहर व्यावहारिक WWII को devastation छोयो छैन। प्राग, मध्ययुगीन केन्द्र संरक्षित। यो cobbled भेगका चोकहरूमा, सडकमा, धेरै बेन्चहरूले र spiers असर गर्छ।
तथापि, प्राग के योजना, पुरानो भवन यसलाई reckon गर्न हतार छैन। यो केवल आफ्नो ऊर्जा, संस्कृति, संगीत र स्वादिष्ट खाना तपाईंलाई overwhelm एक आधुनिक र सक्रिय शहर हो।
पुरानो प्राग तपाईं बस आफ्नो अचम्मको गल्लीहरूमा मार्फत टहलने गर्न सक्छन् भन्ने तथ्यलाई लागि उल्लेखनीय छ। वैकल्पिक, एक मार्ग चयन गर्नुहोस्। सूर्य वा हावा तिर जानुहोस्। आफ्नो आँखा सुन्दर दृश्य र वास्तु प्रकाश निरन्तर predstavat हुनेछ अघि। यहाँ एक त्यो, प्राग छ।
तपाईं नयाँ वर्षको मा शहर भ्रमण गर्न हुन भने, अद्भुत उत्सव कहिल्यै तपाईं भूल हुनेछ। तपाईंलाई के को grandiose योजना निर्माण छैन हिउँदमा प्राग। बस पैदल भीडलाई बाहिर र आसन्न जानुहोस्।
Czechs को जाडो बिदा प्रेम र तिनीहरूलाई मजा र हल्ला मनाउन। कहिलेकाहीं यो देश एक नृत्य शो चल्छ जस्तो देखिन्छ। आखिर, प्राग नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या कहिले काँही त्यहाँ तारा र स्थानीय संगीतकार हुन् जहाँ चरण मा एक विशाल डिस्को जस्तो। र यो खुला हावामा सबै छ! भन्दा यो समयमा चिसो अधिक अक्सर।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या मा शहर मा एक आतिशबाजी शो आयोजित। यो एक महान् अमरीकी छ। हरेक वर्ष, धेरै पर्यटकहरु सुन्दर आतिशबाजी आनन्द आउँछन्।
जनवरी मा प्राग गर्न कुराहरू? शहर छुट्टी आत्मा Hovers। पर्यटक सिद्ध पोशाक परेड, यो "तीन राजा"5जनवरी मा भनिन्छ साक्षी गर्न सक्नुहुन्छ। एक 6th Czechs इपिफ्यानी Name मनाउन।
साथै, धेरै उत्कृष्ट स्की रिसोर्ट्स, सुन्दर rinks छन्। पनि प्राग उच्च गुणस्तरीय बियर बारे मा भूल छैन। ऐतिहासिक सम्पत्तिहरू प्रेम शहर को अविस्मरणीय ठाँउहरु आकर्षित।
गर्मी मा प्राग
यो समयमा शहर भ्रमण गर्ने पर्यटक, तपाईं अद्वितीय जलवायु लागि तयार हुनुपर्छ। न्यानो मा गर्मी, तर तातो छैन मा। औसत तापमान - 18 डिग्री शून्य माथि। तथापि, पछि प्राग मई को महिना र अन्त्य अगस्ट लगभग सधैं पानी।
तर चिन्ता नगर्नुहोस्। तिनीहरूले व्यावहारिक मनोरञ्जन हस्तक्षेप छैन। सबै पछि, तपाईं सधैं वर्षा मा प्राग गर्न केही पाउन सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, एक आरामदायक क्याफे मा एक कप कफी, चेक बियर को एक स्वाद वा रक्सी एक गिलास आनन्द। र तपाईं धेरै ऐतिहासिक स्मारक अचम्मको शहर भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ।
शहर चकित र उनको संग्रहालय, वास्तु भवन, सुन्दर cathedrals, ग्यालरीमा विस्मित गर्न सक्षम छ। त्यसैले, पर्यटक प्राग के अग्रिम योजना आवश्यक छ।
यो केवल असम्भव, शहर मा भ्रमण भएको छ, अद्भुत ठाँउहरु अन्वेषण:
सेन्ट Vitus गिरजाघर। यो प्राग क्यासल मा स्थित छ। गिरजाघर लगभग 600 वर्ष पहिले बनाइएको थियो।
पुरानो टाउन स्क्वायर। को Astronomical घडी संग शहर हल को ध्यान त्यहाँ आकर्षित हुनेछ।6शताब्दीयौंको दौडान प्रत्येक घण्टा मा एक अद्वितीय शो प्रकट भएको Astronomical घडी। मृत्यु को आंकडा घंटी हिट। त्यसैले त्यो जीवनको impermanence सम्झन्छन्। त्यसपछि विन्डो देखि निस्कनु 12 प्रेरितहरूले।
पाउडर टावर। यो एक अवलोकन पोस्ट। तपाईं 44 मीटर को एक उचाइ देखि शहर को सुन्दर परिदृश्य पराउँछु गर्न सक्नुहुन्छ।
चार्ल्स ब्रिज। यो साँचो कृति हो! यो 30 पत्थर मूर्तिहरु संग सजाया छ।
प्राग, धेरै उल्लेखनीय संग्रहालयहरु:
डेलाईट समयमा शहर मार्फत एक पैदल योजना गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यो प्राग धुलो को गिरावट, यो एकदम विशिष्ट देखिन्छ जब कि उल्लेख गर्नुपर्छ। एक sinister मोड दान सक्षम भएको मध्ययुगीन सडकमा gothic वास्तुकला।
साँझ प्राग के योजना गर्दा, प्रदर्शनी केन्द्र Vystavshte टाउको सुनिश्चित। फोहराहरू गाइरहेका - सूर्य तल जान्छ जब, यहाँ एक डरलाग्दो शो सुरु हुन्छ। यो अमरीकी भूल बस असम्भव छ! यो 19.00 मा हरेक दिन सुरु हुन्छ। शो को अवधि - 40-60 मिनेट।
तपाईं बस मधुर स्वर संगीत संग, प्रदर्शन जो मिश्रण सिम्फनी आर्केस्ट्रा बदलिने हाइट्स, को रंग पानी जेट प्रसन्न हुन्छु। पुराना र आधुनिक टन को ध्वनि Odile र Odette, साना मत्स्यस्त्री र कार्मेन, रोमियो र जूलियट, सुन्दर Esmeralda "जीवित आ"।
बच्चाहरु संग बिदाहरू
यो बच्चा रोचक थियो, प्राग गर्न कुराहरू? चिडियाखाना भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस्। उहाँले युरोप को सबै भन्दा ठूलो मध्ये एक छ। दुवै बच्चाहरु र वयस्क रसीला प्रकृति संग विशाल बाडों मा शावक जनावरहरूलाई को चिन्तन बाट साँचो खुशी प्राप्त हुनेछ। उपयुक्त अवस्था प्रत्येक पशु लागि बनाईएको हो।
छैन चिडियाखाना टाढा एक वनस्पति उद्यान छ। एक खुशी - यो हिंड्न! केवल प्राग वनस्पति उद्यान को ट्रपिकल ग्रीनहाउस कदर हुनेछ। युरोप मा, यो अरु कतै पूरा हुनेछ।
प्राग - एक अद्भुत शहर! यो वर्ष कुनै पनि समयमा यसको आगंतुकों स्वीकार्नुहुन्छ। र, मौसम भए तापनि, तपाईं सधैं सबैका लागि केहि पाउनुहुनेछ। यस मामला मा, एक छुट्टी को उज्ज्वल र सुन्दर छाप फर्कनुहोस्।
Notre-Dame Basilica - शहरी jewel, सारा संसार थाह
सस्तो मास्को थिएटर मेट्रो टाढा छैनन्
को सोभियत संघ मा सांस्कृतिक क्रान्तिको
जीवनी Azamat Bishtova: संगीत क्यारियर र व्यक्तिगत जीवन
जिनोम, इच्छा-पूरा: एक कारण रूपमा? विस्तृत निर्देशनहरू र सिफारिसहरू
TRIER - यो के हो?